Boqoradda waxay jeceshahay Clive Scott, GM-ka Sofitel Melbourne
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Boqoradda waxay jeceshahay Clive Scott, GM-ka Sofitel Melbourne
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Nooloow boqoradda! Boqoradda Elizabeth II ayaa xustey dhalashadeeda 1190 Australiyaan ah. Boqoraddu maahan oo keliya madaxa Dawladda Boqortooyada Ingiriiska, laakiin sidoo kale Australia, Kanada iyo 13 waddammada kale ee Barwaaqo Sooranka.
Xubin sharaf leh oo ku jirta liiska sharafta Queens waa xubin ka mid ah warshadaha martigelinta Australia iyo Maareeyaha Guud ee kooxda hoteelka Accor.
Kooxda Hoteelka Faransiiska ee ACCOR waa ku faraxsan yihiin waxayna rabaan adduunka inay ogaadaan, in mid iyaga u gaar ah aysan aqoonsan cid kale oo aan ahayn Boqoradda.
Clive Scott, Maamulaha Guud ee Accor ee Sofitel Melbourne On Collins, ayaa loogu magac daray Liiska Maamuusyada Dhalashada boqoradda ee sanadkaan isagoo xubin ka ah Amarka Australia (AM).
Sharafta waxaa la siiyay kaliya 252 qof oo helay 2021, iyadoo Mr. Scott loo doortay shaqadiisa muhiimka ah ee uu u hayo hoteelka hoteelka iyo farshaxanka.
Clive Scott waxay in ka badan 45 sano u hibeysay warshadaha soo-dhawaynta. 26-kii sano ee la soo dhaafay, Mr. Scott wuxuu qabtay door muhiim ah oo hoggaamineed oo kala duwan shirkadda 'Accor' ee kheyraadka aadanaha iyo howlaha guud ahaan Australia. Mr. Scott wuxuu 16-kii sano ee la soo dhaafay ahaa Maamulaha guud ee shirkadda Sofitel Melbourne On Collins, isagoo ka dhigay mid ka mid ah maamulayaasha guud ee hudheellada ugu muddada dheer magaalada Melbourne. Isaguna waa Guddoomiyaha Guddi-hawleedka Dhaqaalaha Booqdayaasha ee Guddiga loogu talagalay Melbourne.
Mr. Scott wuxuu yidhi: “Waan ku khushuucay abaalmarintan waxaanan rajaynayaa in dadaalkaygii sanadihii la soo dhaafay ay ka taageerayeen farshaxanno nooc kasta leh si ay u gutaan farshaxanadooda.. Shaqadayda fanka iyo soodhaweynta waxay si qani ah aniga shaqsiyan iigu qancisay waxaanan rajaynayaa inaan waxbadan qaban doono mustaqbalka. ”
Maamulaha Accor Pacific, Simon McGrath AM, wuxuu yiri: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko Clive Scott oo laga aqoonsan yahay shirkad la ixtiraamo oo ku jirta Liiska Maamuusta Dhalashada Boqoradda. Clive wuxuu u heellan yahay kor u qaadista sumcadda iyo horumarinta dalxiiska iyo farshaxanka ee Australiya sharafkanina waa mid si weyn loogu aqoonsaday shaqadiisa adag iyo saamaynta weyn ee uu ku yeeshay. ”
Mudane Scott wuxuu si firfircoon oo xamaasad leh ugu lug leeyahay ganacsiga iyo farshaxanka bulshada Melbourne. Wuxuu xubin ka yahay Guddiga Oceania Australia Foundation, Guddoomiyaha Georges Mora Fellowship, Guddoomiyaha Waaxda Maareynta iyo La-talinta Suuqgeynta ee Jaamacadda Melbourne, wuxuuna hayaa abaalmarinta Guddoomiyaha Garsoorayaasha ee Abaalmarinta Melbourne ilaa 2016. Waxa kale oo uu xubin ka yahay Guddiga La-talinta Shirkadaha Iskaashatada Dhallinyarada iyo Adeegyada Qoyska ee Hope Street, Guddoomiyaha Guddida La-talinta Finucane & Smith iyo xubin ka tirsan Guddiga Ammaanada Abaalmarinta Melbourne.
Wuxuu sidoo kale ka caawiyay lacag ururinta iyo horumarinta ciyaartoy badan oo muhiim ah oo ka mid ah fanka Melbourne, sida Chunky Move Dance Company, Australian National Academy for Music, Craft Victoria, Heide Museum of Art Modern, The Australian Ballet, National Gallery of Victoria, Opera Victoria, Monash Gallery of Art, iyo Melbourne Symphony Orchestra.
Mr. Scott waxaa sidoo kale la gudoonsiiyay bilada Dalxiiska Dahabiga ah oo uu ka helay Wasiirka Dalxiiska ee Faransiiska kaalintii uu ka qaatay horumarinta dalxiiska ee u dhaxeeyay Faransiiska iyo Australia Waxaa la siiyay abaalmarinta 2013 Silver Bernache ee Accor qaybta Ixtiraamka / Mas'uuliyadda Bulshada, iyo 2015 waxaa laga dhigay xubin sharafeed ka tirsan Les Clefs d'Or Australia. In 2018, waxaa laga dhigay xubin ka mid ah Ururka Khamriga ee Bordeaux waxaana la siiyay Abaalmarinta Brolga oo ay bixiso Ururka Qoob-ka-ciyaarka Australiya ee loogu talagalay adeegyada Dance Sport ee Australia.
Mr. Scott ka sokow, 1190 kale oo Australiyaan ah ayaa helay abaalmarinta 'Queens Honor'.
Riix halkan liiska sharafta 2021.